Nhengo dzeUNWTO dzinofanirwa kutora matikiti kuenda kuMarrakesh izvozvi? Aihwa!!!
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hurumende Nhau » Nhengo dzeUNWTO dzinofanirwa kutora matikiti kuenda kuMarrakesh izvozvi? Aihwa!!!
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hurumende Nhau • Health News • Musangano Weindasitiri Nhau • Marokero Kuputsa Nhau • nhau • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
UNWTO nemakurukota ezvekushanya kubva kunyika dzinopfuura zana vari mubishi kutenga matikiti ekuenda kumusangano mukuru wechi100 weWorld Tourism Organisation.
Zvinoenderana neruzivo rwakatambirwa kubva mukati meiyo UNWTO manejimendi hapana matikiti anogona kudikanwa, kunze kwekomputa yakanaka neinternet yekubatana kuenda kumusangano.
The 24th General Assembly yeWorld Tourism Organisation (UNWTO) yakarongerwa kuitika kubva munaNovember 30 kusvika Zvita 3 kuMarakesh, Morocco.
eTurboNews akafanotaura kumiswa kweGeneral Assembly muna Chikunguru. Pakutanga kwemwedzi uno kufungidzira uku kwakaitika chaizvo apo UNWTO yakaita mazuva matsva ari pamutemo.
Masosi akaomeswa mukati meWorld Tourism Organisation ave kuratidza zano rakasiyana ringave riri mukugadzirwa.
Kunyangwe vafambi vakazara vakazara kuenda kuMorocco vanonyeverwa nehurumende, kusanganisira United States kuti dzidzivise kuenda kuHumambo hweMorocco nekuda kwespike mune yakanyanya kutapukira Delta musiyano weCoronavirus.
Sisitimu yezvekurapa muMorocco haina kugadzirirwa kubata kumwe kuwedzera kwenyaya dze COVID-19, uye kubata General Assembly muNyika yeNorth Africa kunogona kuve nenjodzi nhume dzinobva munyika dzinosvika zana nemakumi matanhatu dzisingade kutora.
Kugadzirira zviri pamutemo kwechiitiko chakakosha ichi kuchiri kuenderera, asi sosi inodzidziswa mukati mehofisi yeUNWTO kuMadrid yakaratidza eTurboNews iko kugadzirira kwekutanga chaiyo General Assembly yakagadzirirwa panguva ino.
Zvinotarisirwa kuti shanduko yakadaro haizoziviswa kusvika miniti yekupedzisira uye panogona kuve nechakangoita hunyanzvi chikonzero nechino UNWTO secretary-general eTurboNews irikuongorora izvozvi.
Senguva dzose, eTurboNews akaedza kuwana ongororo yakananga kubva kuUNWTO.
Nehurombo, UNWTO Kutaurirana maneja Marcelo Risi akazova nyajambwa wesangano rinotungamirirwa nekutya, kutyisidzirwa, uye kumanikidzwa, uye kutaurirana zvakasununguka chikamu cheizvo a director wekutaurirana hazvitenderwe kuita.